Isi > Akụkọ Ndị Ịga nke Ọma > Otu esi esi na 200 gaa 500 rubles kwa ụbọchị
25.10.2018 · 18 · Ntinye niile maka October 2018
Ezigbo ụbọchị niile, akụkọ m nwere ike bụrụ ihe mkpali nye ụmụ agbọghọ na-amaghị otú e si esi ịda ogbenye na ọnọdụ ndụ siri ike. N'ezie, ọ bụrụ na ị na-eji ejiji, ụlọ oriri na ọṅụṅụ na ndụ bara ọgaranya, ị gaghị aghọta. Ndị maara ọrụ siri ike bụ maka pennies na nsogbu na-adịgide adịgide - isiokwu a bụ maka gị! Ee, n'eziokwu, ọ bụghị naanị maka ụmụ agbọghọ, ụmụ okorobịa, usoro a dịkwa mma. Taa, m ga-akọ akụkọ banyere ndụ m ma nye gị ntuziaka site na ntinye iji mee ka ego dị na 200 gaa 500 rubles kwa ụbọchị.
Esi esi na 200 gaa 500 rubles kwa ụbọchị - mmalite
Ya mere, obere ihe banyere onwe m, aha m bụ Alina Kolesova, abụ m 27 afọ, na otu afọ gara aga ndụ m dị iche na ọtụtụ puku ndị ọzọ. Mgbe ha gụsịrị akwụkwọ, e nwere ụlọ ahịa ahia, mgbe ahụ, alụmdi na nwunye mbụ, nke dara n'oge na-adịghị anya, ịchọ ọrụ mgbe nile maka ọrụ na obi nkoropụ.
Nne na nna m agaghị ekwe ka ihe ọ bụla ọzọ: na 90-e siri ike - nri kachasị na nri, ihe si n'aka nke abụọ na ezumike ezumike n'ụlọ!
Ee, ọtụtụ ndị na-echeta ụdị ndụ a ma mara otú o siri ike! Ná mmalite nke 2000 - x ọ bịara dị mfe - nna m nwetara ọrụ dịka onye injinia na ụlọ ọrụ na-ewu ụlọ, mama m mụbara ụgwọ ọrụ nke onye na-akwa ákwà n'ụlọ ọrụ ahụ! Ma, ego bụ nsogbu bụ isi nke ezinụlọ anyị. Ma laghachi na akụkọ m. Ebe ọ bụ na m ka na-agaghị arụ ọrụ, ana m achọ mgbe niile maka ụzọ m ga esi esi na 200 gaa 500 rubles kwa ụbọchị.
Ụzọ nke nnwere onwe ego
Mgbe m gbachara alụkwaghịm site na di m, alaghachiri m ndị mụrụ m na obere ụlọ ha n'otu ebe obibi nke Orenburg. N'ezie, enwere ịda mbà n'obi na ọtụtụ nsogbu: ọ dịghị ọrụ, dịka, na ego, ndị nne na nna mere agadi nwere obere ụgwọ ezumike nká ... N'ikpeazụ, ọ dịghị atụmanya. Ka oge na-aga, achọtara m ọrụ dị ka onye na-akwụ ụgwọ n'ụlọnga a ma ama nke ụlọ ahịa a ma ama na 18 000 rubles. N'ezie, ego a ezughị oke ndụ nwa agbọghọ.
Nke a mere ihe dị ka otu afọ na ọkara. Ihe niile gbanwere okwu ahụ ma zute enyi enyi ya. Anyị gbabara n'okporo ámá! Ka anyị gaa cafe ma kwuo okwu. Achọpụtara m ozugbo ya akwa na akwa ngwa - ọ bụ ihe ịtụnanya maka m, n'ihi na tupu nke ahụ, Daria ejideghị kpakpando site na mbara igwe. Dị ka ọ dị na mbụ, ha malitere ịkọkọrịta nsogbu na akụkọ ndụ. Enwegh m ihe ọ bụla m ga-agwa, ma enwere m mmasị na ajụjụ banyere otú enyi m si ebi ndụ. Ị maara, ọ fọrọ nke nta ka ọ kọọrọ ndụ m ụfọdụ nuances. N'ikpeazụ, o kwuru, sị: - "Alina, kwụsị ịkwa emo, jikọta onwe gị ma malite inweta ụdị m!
N'ezie, abughi m nde mmadụ, mana m ga-agwa gị otu esi esi na 200 gaa 500 rubles na ụbọchị. N'otu oge ahụ, zuru onwe gị pụọ na onye ọ bụla na usoro a na-enye n'efu! N'ebe a, ọ tụrụ m n'anya nke ukwuu - naanị ụdị ego a dị m ọnụ. Ma ka nwere mmasị. Ya mere, enyi m nwanyị gwara m banyere ịzụ ahịa ụlọ ahịa na-arụ ọrụ na njedebe oge - ọfọn, Enwere m anya ndị a na nkebi ahịrịokwu a. N'agbanyeghị aha ahụ dị mgbagwoju anya, ihe niile adịghị mfe, na ihe kachasị mkpa - uru! Mgbe m gere enyi m ntị, agara m n'ụlọ m nwere ihe mgbaru ọsọ doro anya iji mụọ ajụjụ a ma gbalịa! Ọ bụ otu afọ gara aga - taa ndụ m gbanwere kpam kpam: ụlọ nke m, ụgbọ ala.
Otú m si eme ego
Na nduzi zuru oke, ma na-ekelekwa maka ndụmọdụ nke ezigbo nwoke na ụlọ ọrụ ọnụọgụ abụọ.
O malitere kpam kpam - n'ụzọ doro anya na-agbaso ndụmọdụ nke Darya, m lọtara ma nọdụ ala na kọmputa. Meghere weebụsaịtị nke ụlọ ọrụ Binomo (nke a bụ nyocha ahịa n'ịntanetị), kere akaụntụ ma malite ịmụta otú e si azụ ahịa n'ahịa ego.
M ga-agwa gị ntakịrị ihe banyere ahia ọnụọgụ abụọ na ụkpụrụ nke ọrụ na mpaghara a. Ya mere, ọnụọgụ ọnụọgụ ọnụọgụ abụọ bụ ụdị nke nkwekọrịta nkwekọrịta n'Ịntanet bụ nke ọnọdụ abụọ na-emetụta maka inweta uru:
ezi mkpebi nke ahịa,
oge nke nkwekọrịta ahụ.
Ihe niile dị mfe, dịka ọmụmaatụ, euro na-ebelata dollar - eserese ahịa na-agbada. A pụrụ ịkọwa mgbanwe ndị dị otú ahụ n'ụzọ dị mfe site n'iji njirimara na-egosi ihe nlele. Mgbe ahụ anyị na-eme ụzọ atọ dị mfe:
Anyị na-emepụta ọnọdụ ahụ,
Tọọ ụbọchị njedebe maka nkwekọrịta nkeji 5-10.
Anyị na-enweta nkwekọrịta ahụ na 87% uru.
Ọ bara uru na-ekwu na ọ bụrụ na ị nwere njehie, ị nwere ike ịkwụsị ikwekọrịta nke nkwekọrịta ahụ! Usoro azụmahịa ndị a dị mfe ma ghara ịchọ ọtụtụ mgbalị. N'otu oge ahụ ọ na-emepe atụmanya dị ukwuu.
Ọzụzụ, ọzụzụ na azụmahịa amalite
Enwere m ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ otu ọnwa na ọzụzụ na ọzụzụ na akaụntụ nchịkwa (ọkachamara pụrụ iche). Ma mgbe nke ahụ gasịrị, amatara m na m ga-enwe ihe ịga nke ọma. Amalitere m ọrụ m dịka onye ahịa nke nwere isi ego mbụ nke 3000 rubles (ego m niile n'oge ahụ)! Ihe ndi mbu mere m 1500 rubles maka 2 awa! Chee echiche awa 2 na ego dị otú a! Ka ọ na-erule ngwụsị nke ụbọchị ahia, isi obodo m okpukpu abụọ. N'ụbọchị nke abụọ, akaụntụ ahụ nwere 18 000 rubles - ego m na-akwụ kwa ọnwa!
Otu esi esi n'aka 200 gaa 500 rubles ego na Intanet site na ntuziaka site na ntuziaka
N'ezie, n'oge afọ ahia, e nwere ọganihu na ọdịda, ma na ya, ihe a rụpụtara siri ike - n'oge afọ m nwetara 950000 rubles! Ma ugbua enwere m obi uto - oru nke onye na-agbazi ego bu n'oge gara aga, nakwa nke ịda mbà n'obi, na ịda ogbenye! Ka i wee nwee ike ikwughachi ihe ịga nke ọma m, ma ọ bụ na ọ dịkarịa ala nyochaa ohere nke ọnụọgụ ọnụọgụ abụọ, ana m atụ aro usoro nkwụsị site na nkwụsị maka ịmalite na-aga nke ọma n'ahịa:
Soro njikọ dị n'okpuru. https://binomo.com na debanye aha. Maka nke a, a ga-enye gị ụzọ abụọ dị mfe:
Mgbe nke ahụ gasịrị, mụọ ntuziaka mmekọrịta na imewe nhọrọ ọnụọgụ abụọ ma rụọ ọrụ na ụlọ ọrụ ahụ. N'ihi ya, ị nwere ike ịghọta otu esi arụ ọrụ na ahịa, ị nwere ike inyocha ike gi n'okwu a.
Malite mmụta. Ee, ị ga - amụta - na - enweghị nke a, ahịa anaghị enwe ihe ọ bụla ị ga - eme. Echegbula ụlọ ọrụ ahụ Binomo n'ihi na ndị mmekọ ya na-enye usoro ọzụzụ nyocha n'efu na-adabere na ọrụ dị mfe na nke ọma
Mgbe nkwupụta, gaa na - - maka nke a, jiri akaụntụ ngosi. N'ebe a na ụlọ ọrụ nke ụlọ ọrụ (ma kpamkpam n'efu) ị nwere ike ịzụ maka oge na-akparaghị ókè. Naanị site n'ịmụta nkà na uru bara uru, ị nwere ike ịmalite ezigbo ahịa.
Họrọ usoro ahia. Nke a bụ usoro usoro nke ọrụ pụrụ iche na usoro maka nyocha ahịa ahịa na ịzụ ahịa ọma. Maka nke a ị nwere ike iji nchịkọta ụlọ ọrụ ụlọ ọrụ. Binomo:
Ịhọrọ usoro ahia, jide n'aka na ị ga-amụ ọrụ ya na akaụntụ ngosi. Nke a ga - ebuli ịdị irè nke ojiji ya!
Ugbu a ị dị njikere ịrụ ọrụ dịka onye ahịa n'ahịa ahịa ọnụọgụ abụọ ma mee nnukwu uru! Iji nweta ezigbo ego, ị chọrọ isi mmalite nke 10 USD.
Na omume, usoro dum dị ka ndị a:
Họrọ ego nke ego maka nyocha - were otu nke ikpo okwu na-enye ndị nkwekọrịta ahịa kachasị mma.
Iji ngwaọrụ nke usoro ahụ, anyị na-enyocha ahịa ma na-echere maka akara maka nhazi.
Tọọ oge iji kwụọ ụgwọ.
Tọọ ụda nke ọnụ ahịa ahịa.
Na mgbaàmà nke ngwaọrụ ngwaọrụ anyị mepee nkwekọrịta.
Mgbe nkeji ise mgbe njedebe nke ọnọdụ ahụ gasịrị, anyị na-enweta uru nke dollar 81,5. Ị nụrụ nke ọma, ọ dị n'ime nkeji ise. Nke bụ eziokwu bụ na oge nke nkwekọrịta ọnụọgụ abụọ nwere ike ịbụ site na nkeji ruo otu ụbọchị. Ya mere, ị nwere ike ịme uru na nkeji ọ bụla! Ugbu a, ị ga-aghọta otú e si esi na 200 gaa 500 rubles kwa ụbọchị.
Egosila m ihe omume m na-eji onwe m eme ihe kwa ụbọchị. Nke ahụ bụ otú m si nweta ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ otu nde n'ime afọ. M gbanwere kpamkpam ndụ m na-agba chaa chaa na enweghị olileanya na ndụ nke onye bara ọgaranya. Kedu ihe na-egbochi gị ịbanye na m? Enwere m ntụziaka a maka gị maka na ụzọ a nke inweta ego anaghị atụ egwu mpi. Ahịa ụwa buru ibu na ọ bụrụgodị na ọtụtụ puku mmadụ amalite ịmalite inweta ego na ya, ọ ga-abụ nanị ụda oké osimiri.
Otu esi enweta na 1000 rubles Internet kwa ụbọchị
Otu esi eme ka ego di na 1000 Internet ...
M malitere na clicks na igbe, na ...
Kedu ka ị ga - esi mee ego ...
Otu esi kesaa nkwụnye ego na nhọrọ ọnụọgụ abụọ ruo 500 dollar kwa ọnwa!
Otu esi emeziwanye ọnụọgụ ọnụọgụ abụọ itinye ego na 500 dollar kwa ọnwa! 3.9 (77.78%) ...
Mkparịta ụka: 18 kwuru
Ọ bụghị nanị site na Binomo, kama site na Forex, enwere m ma 1000 rubles ma emeela m elu. M na-akwado ịme ihe ọmụmụ weebụ wee malite ịzụ ahịa.
Ọ dị mma na e nwere Binomo, na Intanet, ma e wezụga maka ụlọ ahịa, ọ gaghị ekwe omume ị nweta ọtụtụ ihe ma na-aga n'ihu ebe ọ bụla. Ọ bụrụ na ị kwenyeghi, i nwere ike ịnwale.
Ọ dịbeghị mgbe m gbalịrị iji nweta ọnụọgụ nhọrọ, ma isiokwu ahụ na-ekwu banyere eziokwu nke ego site na ịzụ ahịa. Aga m aga chọọ ntanetị n'ịntanetị ebe ọ bụla.
Ọ dị mma na e nwere Binomo, na Intanet, ma e wezụga maka ụlọ ahịa, ọ gaghị ekwe omume inweta nnukwu ihe na mgbe ọ bụla. Ọ bụrụ na i kwetaghi, i nwere ike ịnwale. Ana m arụ ọrụ na Binomo.
Ma isiokwu a abụrụ m ihe ngbu, n'ihi na ego m furu efu na anya m mechiri. Nanị ezughị okè m abụghị ịzụ ahịa.
N'agbanyeghị nke a, e nwere ụzọ isi nweta ego n'ejighị ego, ma a ghaghị ile ha anya dịka ụzọ dị irè isi mepụta isi mmalite. Tụkwasị na nke ahụ, ịmalite site na ọkọlọtọ na-enyere aka iji nweta ahụmịzọ mbụ nke ọrụ ahụ.
Maka ndị mbido, kwadoro iji ihe ọmụmụ weebụ. Na mmalite, ị nwere ike nweta ntakịrị.
Otu n'ime ụzọ kachasị mfe na kachasị mfe iji nweta ego bụ ịkpata ego na ngwa maka gam akporo na iOS. Usoro a bara uru maka onye ọ bụla nwere ekwentị! Kwa ụbọchị ọnụ ọgụgụ nke ngwa pụrụ iche na-abawanye ma ị nwere ike ịchọta ọrụ dịgasị iche iche n'ime ha nke na-adịghị achọ nkwụnye ego na njedebe nke oge.
Inye ego n'Ịntanet maka ịbanye na captcha nwere ike ịkpọ ụzọ kachasị njọ. Ọzọkwa, ugwo maka ya bụ ihe kachasị dị ala. Ma ma e wezụga akụkụ ndị na-adịghị mma, e nwekwara ndị na-agbakwunyere - onye ọ bụla nke nwere ike ịchọta ya n'ụzọ dị otú a na usoro a anaghị achọ nkà na ahụmịhe pụrụ iche. Ọ bụ ya kpatara ya, ọ bụrụ na ị bụ onye mbido, ịnwere ike ị nweta "akpa rubles" na captcha!
O doro anya na ị na-etinye ego na Intanet site na 200 rub. kwa ụbọchị na ọnụọgụ ọnụọgụ nhọrọ. Nke a ga-abụ usoro ọzọ nke ego m nwetara na Intanet. Ka m na-arụ ọrụ mgbasa ozi na-arụsi ọrụ ike, CAP. Ana m enweta ụbọchị, ma ọ bụ karịa otu abalị (mgbasa ozi ndị ọzọ "ego") na 100 rub.
Alina, mụ onwe m na-ere ahịa na mgbanwe ngwaahịa, ma o doro anya na ọ bụghị onye ọ bụla! Na ntorobịa nke oge a, dị ka ị kwuru n'ụzọ ziri ezi na mmalite nke aji, na na, nye ya niile n'otu oge. Ndị mmadụ enweghị echiche nke mmepe na ọmụmụ ihe bara uru! Ọbụna karị, ọ dịịrị ha mfe ịgbaso nkwụsị ahịa nke isi a. @ Biko maka okwu dị otú ahụ!
Kwesịrị ịnwale. Anụtụbeghị banyere saịtị dị otú ahụ. Karịsịa ya, ị nwere ike ịme ezigbo ego.
Enweta na netwọk - nke a bụ otu ọrụ na ebe ọ bụla. E nweghị ego efu n'efu. Nanị ihe nwere ike ime naanị ndị nwere ọmarịcha ahụmahụ. Ndị ọzọ ga-arụsi ọrụ ike maka obere ego.
Na-etinye ego na Intanet site na 200 rub. kwa ụbọchị na ọnụọgụ ọnụọgụ nhọrọ. Nke a ga-abụ ọkwa ọzọ nke ego m nwetara na Intanet.
Iji nwekwuo ego, ọ dị mkpa inweta ọkwa dị mma karịa oge, iji kwadebe pọtụfoliyo, ọnụ ọgụgụ nke nyocha dị mma na-arụ ọrụ. Mgbe ahụ ị ga-enwe ike ịtụkwasị iwu ndị dị oké ọnụ ahịa obi. Ná nkezi, ezigbo ọkachamara na-enweta ihe karịrị 50 000 rubles kwa ọnwa, nke a esikwaghị na njedebe.
Ka ha na-ekwu, "nke ọma, ebe anyị na-adịghị." Kama n'eziokwu na na otu ụbọchị i nwere ike ịnweta Ịntanetị na 200 rubles. Obere obere - "karịa 50 000 rubles kwa ọnwa"! Ka m na-enweta ahụmahụ, ana m agbalị ịnweta penny na igbe
E nwere ọtụtụ ihe atụ nke ọrụ mmepe na-emepe emepe na RuNet bụ ndị na-akpali akpali maka ndị niile kpebiri ịnwale aka ha n'ụdị ọrụ ọhụrụ.
Ya mere, gịnị mere ọtụtụ ndị ji anọdụ ala na-eti mkpu na ego adịghị! Mgbe gburugburu ọtụtụ ụzọ iji mee ego. Ọ dị mkpa ịghara ịnọdụ n'egwuregwu ahụ iji gwuri egwu, kama iji nweta ego na Intanet.
Nyocha nke NIKE
Ahịa na Twitter 29.09.2014